Buy 8 and Half Stories For Rent (ID-1162) (200Lks) in မင်္ဂလာတောင်ညွန့် on ipivi.com
8 and Half Stories For Rent (ID-1162)
8 and Half Stories for rent in Mingalar Taung Nyunt Township. Land area - 4000 sqft. Hall type. Can use as office or hotel.
Monthy Rent Price - 200 Lks (Nego)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် ၈ထပ်ခွဲလုံးချင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၄၀၀၀ စတုရန်းပေရှိသည်။ အိမ်ခန်းအတွင်း အခန်းများဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ရုံးခန်း (သို့မဟုတ်) ဟိုတယ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လစဉ်ငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်း - သိန်း ၂၀၀ (ညှိနှိုင်း)
Diamond Condo For Rent (ID-724)
Sanchaung conden for rent
Condo For Rent in Star City
အမည်: 8 and Half Stories For Rent (ID-1162)